गणतन्त्रपछि मुलुकले पक्रेको दिशा र अबको मार्गचित्र | Ratopati
personरातोपाटी डेस्क exploreकाठमाडौं access_timeजेठ २८, २०७६ chat_bubble_outline1
मुलुक गणतन्त्रमा गएको एउटा लामो कालखण्ड बितिसकेको छ । संक्रमणकालको अवधि पार गरेर, संविधानसभाको माध्यमबाट गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेर तथा चुनावको माध्यमबाट दुई तिहाईको बलियो सरकार समेत प्राप्त गरेर मुलुक यतिखेर अगाडि बढिरहेको छ ।
गणतन्त्र प्राप्तिको यो कालखण्डमा मुलुकको समग्र हिँडाइको दिशा कस्तो रह्यो ? राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्य, सामाजिक, सुरक्षा लगायतका दृष्टिकोणले यो हिँडाइको गति, गन्तव्य र दिशा ठीक–बेठीक कस्तो रह्यो ? र, मुलुकको हिँडाइको दिशालाई सही गति दिनको लागि अबको मार्गचित्र के हुनुपर्छ ? यी सवालहरुमा केन्द्रीत रहेर रातोपाटी टीमले सम्बन्धित विषयविज्ञहरुबाट संकलन गरेका अन्तर्वार्ता तथा विचारहरुको विशेष सँगालो यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संसारमा सबै ठाउँमा सरकारले आफ्ना उद्योग बचाइराख्न सकेको छ भने नेपालमा किन सक्तैन रु चीनबाट नेपालमा जति लगानी आएको छ सबै सरकारी कम्पनीको आएको हो । अमेरिकामा धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरू सरकारले सञ्चालन गरेको छ । निश्चित ठाउँ र निश्चित विषयमा सरकारले हात हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वाधार विकास बहस : ‘योजनाविनाका ‘आयोजना’ टिपेर पूर्वाधार विकास असम्भव
जहाँ किसानले पानी नपाएर सिंचाइबाट वञ्चित छन्, त्यहाँको पानीमा जहाज चलाउने कुरा गरिरहेको छ । भएका पानीलाई खेत खेतमा पुर्याउने कुरा गर्ने ठाउँमा पानीलाई थुपारेर जहाज चलाउने कुरा भइरहेको छ अनि कसरी हुन्छ कृषिको विकास ?
एउटा विशुद्व संस्थालाई नेताहरूले टुलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहे । अहिले यो संस्कार झन्, धेरै बढ्दै गएको छ । त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाई परेको छ । क्षमतावान प्रहरी भएन, क्षमतावन पोलिसिङ गर्न सकेन भनेपछि ल एन्ड अर्डर समस्या हुन्छ ।
जुन देशहरू १९७०र८० को दशकसम्ममा ध्वस्त भइसकेका थिए । पछि रातारात ती देशहरू औद्योगिक क्रान्तिमार्फत माथि उठे । अहिले उनीहरू स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै सामान विदेश निर्यात गर्न सक्षम भएका छन् । हामीले पनि त्यसो गर्न नसक्ने भन्ने होइन ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नियन्त्रण भन्दा पनि नियमन हुन्छ । मिडियाले पनि नियमनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले पनि तर्कपूर्ण आधारमा नियमनको विधिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन
डा। शंकर शर्मा
हामी कहाँ कर बढाउँदै लगिएको छ तर अन्त घटाउँदै छ । जसले गर्दा झण्डै झण्डै उच्च करको दर भएको देशसँग बराबरको अवस्थामा छौँ । हाम्रोमा सरकारी संयन्त्र त्यति प्रभावकारी छैन । अहिले निजी क्षेत्रसँग पैसा छ, सरकारसँग छैन । निजी क्षेत्रको संलग्नतामा धेरै कुरा गर्नुपर्छ ।
भएका हाम्रा अनुसन्धानशालाहरू केहीलाई छाडेर दुरावस्थामा छ । अनुसन्धानशालाहरूस खासगरी सरकारी संरचनाअन्तर्गतका, उही १०–५ बजेको रुटिनमा चल्छ । वास्ताविक अनुसन्धानशाला त्यसरी चल्न सम्भव नै हुँदैन । ... हाम्रो बढी जोड सैद्धान्तिक शिक्षामा रहँदै आएको छ । यसकारण जनशक्ति र पूर्वाधारहरू हामीसित छ तर एकातिर त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर ती समय सापेक्ष पनि छैनन् । अब हाम्रो जोड–बल तिनको पुनर्संरचना र व्यापक सुदृढीकरणतिर हुनु पर्छ ।
June 12, 2019, 4:13 p.m. RABI
TYO PHOTO MA ITTA LE HANNE RA RANG LAGAUNE HARU KUN KHADI MA CHAN KYA RE!